Zvazvakashatira wokurarama chikwereti
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvazvakashatira wokurarama chikwereti
The kadhi, pane mwedzi unotevera mukanyiwa mari kana Yakabudiswa, zvakadai wokurarama chikwereti nevamwe muripo nzira asi, yakavamba uye wokurarama chikwereti achatora chimbadzo mubereko. Sezvo ritaurwe sezvo zvazvakashatira wokurarama zvikwereti, iwe uve kuti mukuru chimbadzo mubereko.
wakakwirira mubereko prices kupfuura caching
wokurarama chikwereti haritorwi, dzakadai Mari Lending Business Mutemo uye Kufarira Rate Kungorambidza Mutemo. Rave yakatangwa kuzvidzora pedyo Credit Association. Ndiye Investment Mutemo kuva pamutemo hwaro. Uhwu ari chimbadzo ndiyo 20% zvichidzika, wokurarama chikwereti haana interest mubereko kunotemwa mukati muganhu uyu. 15% of interest kazhinji munguva wokurarama zvikwereti iri Somuenzaniso, uri kuenzanisa kwakadaro apo mukuru yakatarwa caching zvishoma pane 200,000 Yen.
In kadhi chikwereti, akadai bhengi mubereko prices vari kuisa kuva yakaderera, kuti chimbadzo inotevera chikwereti mamiriyoni 1 Yen kubva 12,6% 14. 6%, rava yakaderera marongero kupfuura chimbadzo mubereko kuti rakaiswa mune wokurarama chikwereti. Kubva kambani zvikwereti, wokurarama chikwereti rava mashandiro kuti anogona maximize mubereko mari kubva anoishandisa, murayiro, dzakadai iri terevhizheni iri CM, rave kuimba nyore, kwete anoparadzirwa uye zvacho zvikomborero zvakadaro iwe.
caching uye nevatengi mari, pane kuti une dambudziko zvemagariro kuma1990, asi tine vanhu vakawanda vane mufananidzo kunaka, une zvakawanda wokurarama mbiri mune magetsi chimbadzo yakaiswa dzakakwirira.
bhuku | ari wokurarama chikwereti | kufarira rates kufarira mari, chii chikwereti hero ngozi?
wokurarama chikwereti Kokoroeyo ari ersatz zvinhu yacho (pamusoro peji)
Yakabudiswa, zvikuru mutsividzo kana kushandiswa iri kwenguva yakareba. Sezvo Yakabudiswa achatsiviwa nokuda kangani, uye rinopera ka3 chete iwe tasarudza pamwe 3-nguva muripo. Ukuwo, sezvo wokurarama mbiri kubhadhara mari yakatarwa pamwedzi muripo mberi kunotenga panguva wokurarama chikwereti hazvirevi mberi, zvichava zvakawanda akaunganidza nani.
mutsividzo romwedzi iri pana 5000 Yen, uye tenga ari wokurarama chikwereti kubudikidza pamwedzi 20,000 Yen uye 15,000 Yen musiyano acharamba rikaunganidza pasina kupiwa mubayiro. Kana mamiriro ichi kana vakatevera vachava zvimwechete sezvo kuti chikwereti 180,000 Yen mugore rimwe. Uyezve, kufarira mukuru chimbadzo 15 muzana mari iyi zvichawedzerwa. Nokuda kwechikonzero ichi, nguva vacharoverwa akadzokera mberi huchiti doodling Kuti murambe chikwereti kumusoro, ticharamba kutora mhindu. Sezvo
mari manzwiro hauchisina nyore
wokurarama mbiri chenguva pamwedzi debit mari, pane mukana kuwira zvikuru sei kunyange kana kunotenga chete anotora munhu wakaiswa uwandu fungidziro. Nekuti kunyange zvakawanda pamwedzi kubhadhara chete, pane ngozi yokuti kushandisa yakawanda. Nokuti ndicharipira aparadzane nomumwe yakavamba mubhadharo kana nhumbi, akaona pakati uye mutsividzo pamusoro pamwedzi kunowedzera, unogona kukurira, akadai kungorega kunozvitenga. In wokurarama zvikwereti, iri vanoziva kuti kana pane zvikuru nokukwereta panguva Pane drawback kuti zvakaoma kuwana.
chete refu-rokuti mutsividzo iri zvachose kudzivisa nayo
mutsividzo kuripo, asi kana tsika tsvina kuti pamwe, pasina chikwereti ipfupi kwazvo, izvozvo zvichaita kuti arambe kubhadhara nokusingaperi kufarira yakakwirira prices. Wokurarama chikwereti zvechokwadi kubatsira, asi chete vanoti mwedzi pamari yezvikwereti iri kubhadharwa vanoda maduku, unofanira kuziva kuti uri kubhadhara soro kufarira nechikamu nezvishoma nokuripira.
kuti mutsividzo iri diki, kwete chete kwave ichinonoka pashure mutoro zvikuru. Vanhu vakawanda vanowira zvikwereti akawanda vanotaura pane chinzvimbo kwakabva kuti wokurarama chikwereti rava pamukova. Ngatitaurei kushandisa unonyatsozviziva.
Related | kuti wokurarama chikwereti zvinobatsira